Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoha Hery : tsara ho azy ny mametra-pialana
Filoha Hery : tsara ho azy ny mametra-pialana
Aoka isika Malagasy sy ny olom-pirenena tia tanindrazana tsy hijery arina an-tava intsony amin’izao zava-doza misy eto amin’ny firenena izao. Aoka koa ny mpitondra fanjakana hahatsapa tena ka hijery sy hametraka ambony ny tombontsoan’ny firenena ka tsy hijanona hiteny sy hanambara ny marina. Tena efa mihoatra lavitra ny tokony ho izy ny zava-misy iainan’ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Tena tsy izy intsony izao, hoy ny resaka mandeha etsy sy eroa raha vao misy ny olona roa na telo no miresaka ny raharaham-pirenena.
Ombieny ombieny dia matetika ny olona no miangavy ny mpanao gazety mba hanambara izao fahoriam-bahoaka izao ary mangataka koa izy ireny ny hampita ny feo any amin’ny mpitondra fa indrindra any amin’ ingahy Hery Rajaonarimampianina izay filoham-pirenena ankehitriny.
Tsy misy zavatra mandeha intsony eto amin’ny firenena, ary tsy misy antenaina intsony. Efa miseho avy ireo filazana sy fahitana fa latsaka an-katerena ny firenena ka mitaky fiovana maika dia maika sy fahendrena avy amin’ny filoham-pirenena.
Tsy hiteny ny fahantrana sy ny olana ara-tsosialy intsony isika fa efa be dia be no voalazan’ny haino aman-jery isan-karazany eto amin’ny firenena izay ary voalaza teto amin’ity gazety ity mahakasika ny tsy fahafehezan’ny fanjakana intsony ny raharaham-pirenena. Tafahoatra loatra noho ny tafahoatra ny fahantrana ary efa fosain’izao tontolo izao aza ny Malagasy noho izany.
Amin’izao fotoana izao dia miitatra any amin’ny andrim-panjakana ny krizy ankehitriny. Izay manambara fa hiditra any amin’ny korontana ara-tsosialy sy pôlitika vaovao ny firenena raha mitohy izao.
Eo amin’ny lafiny fitsarana no asian’ny mpanaraka ny vaovaom-pirenena fanamarihana voalohany. Rehefa ity andrim-panjakana ity no miady an-trano toa izao zavatra iainan’ny firenena izao ankehitriny dia efa midika izay fa hisy ny ady an-trano.
Tamin’ny herinandro lasa iny ary mbola mitohy amin’izao fotoana izao dia niaraha-nahita fa mikorontana tanteraka ny fitsarana eto Madagasikara. Ny iray voalohany dia ny mahakasika ny kolikoly avo lenta ao amin’ny fitsarana ka napoitran’ilay Frantsay antsoina hoe Houcine Arfa ny kolikoly avo lenta ataon’ity ministera ity ary hatrany amin’ny fiadidiana ny repoblika no voatonontonona amin’izany. Toa mandeha ila nefa ny raharaha ka nahatonga ny sendikan’ny mpitsara SMM manaraka akaiky ity raharaha ity. Tonga hatrany Ambatolampy, toerana nitanana ny mpitsara izay nosamborina antsoina heo Haingo R, izay voalazan’ny sendika fa tsy nanaraka ny fepetra takian’ny lalàna harahina ka nahatonga ny SMM izay tarihin’i Fanirisoa Erinaivo niaraka tamin’ny namany tsy nanaiky ny hitanana ity mpitsara mpanao famotorana ity. Tena manome endrika ratsy ny fitsarana Malagasy mihitsy iny raharaha iny satria mifandrirotra ny tena asan’ny fitsarana sy ny mpitsara manao pôlitika izay momba ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina. Mbola tsy nisy toa izao hatramin’ny repoblika Malagasy nifandimby teto.
Tsy io ihany nefa no olana ankehitriny fa mbola raharahan’ny samy mpitsara sy ny mpahay lalàna indray no mitranga amin’ny fanaisorana tampoka teo ny filohan’ny lehiben’ny fampanoavana ao amin’ny fitsarana tampony (Procureur Général de la Cour suprême) ingahy Ranary Robertson Rakotonavalona.
Voalaza fa tsy nanaraka ny pitsopitsony araka ny lalàna koa ny fanesorana ity mpitsara ambony ity ka izao mifampitory izao indray. Dia mba diniho fa olona samy mahalala ny lalàna avokoa no hiseho fitsarana sy hifampitory ankehitriny noho ny ataon’ny fanjakana misy amin’izao fotoana izao izay tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Tena efa fitadiavana krizy mihitsy no ataon’ity fanjakana ity saingy tsy mety mirotaka ny olona. Ny ain-dehiben’ny firenena ankehitriny no hozongozonin’ny fitondrana HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) izay antokon’ny fitondrana ankehitriny. Aoka hazava ny resaka fa raha toa ka misy tampoka ny korontana pôlitika eto Madagasikara na ny krizy vaovao dia noho ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina ihany.
Raha mbola hotohizina ny raharaha dia tena olana goavana koa ny ao amin’ny governemanta ao. Ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier dia efa tsy raharahian’ingahy Henry Rabary-Njaka intsony. Ity minisitra ny Raharaham-bahiny ity indray no avo feo milaza ny datin’ny fifidianana mialohan’ny filankevitra ny minisitra. Dia mazava fa samy mandeha samy mitady io governemanta io ka izay akaiky an’i Voahangy Rajaonarimampianina izay voalaza fa mpanapaka ny raharahan’ny fitondrana eto Madagasikara no manao izay tiany hatao. Iza indray ary no naniraka an’ingahy Henry Rabary-Njaka nanao iny fanalam-baraka ny fanjakana Malagasy iny tany Frantsa? I Voahangy ve sa i Hery Rajaonarimampianina sa kosa izy mivady? Fady ary tsy fanao ny zavatra toa ireny nefa ireny no nataon’ny minisitra ny Raharaham-bahiny Malagasy izay azo lazaina fa manao fiarovana ny arifenitra toa ny anankandriamaso.
Tena efa tsy izy intsony ireny ary tsy faneho masoandro ny zava-misy eto amin’ny firenena.
Santionany vitsy amin’ny olana lehibe iainan’ny firenena amin’izao fotoana izao ireo.
Noho izany dia tsara ho an’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mihitsy ny mametra-pialana. Tsy mandeha intsony io fitondrana entiny io. Mampanahy ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny. Mihasarotra ny fizotran’ny tantara. Mikorontana ny fitondram-panjakana. Aoka hazava fa tsy ny vahoaka Malagasy velively no hitarika krizy vaovao izao fa ny fanjakana mihitsy no manao izay hisian’ny krizy indray.